Inona ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra? | Fitsangatsanganana tanteraka
Louis Martinez | | Aostralia
Inona ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra? Ity fanontaniana ity dia tsy fahita firy ivelan'ny faribolana ara-toekarena manokana. Miankina amin'ny zava-misy fa toa lavitra antsika ny firenena ranomasina ary tsy dia fantatsika ny momba azy.
Na izany aza, tokony ho fantatrao fa manana Aostralia hofan-trano isaky ny kapita avo kokoa noho ny any Alemana, ny Fanjakana Mitambatra ary i Frantsa. Ho fanampin'izay, laharana faharoa, aorian'ny Norvezyao amin'ny Fanondroana momba ny fampandrosoana ny olombelona ary ny toerana fahenina ao amin'ny kalitaon'ny fiainana nomanin'ny magazine 'Ilay mpahay toekarena'. Noho izany rehetra izany, ny fahalalana hoe iza no orinasa lehibe indrindra any Aostralia dia zava-dehibe amin'ny tontolo manerantany ankehitriny.
1 Inona ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra? Manomboka amin'ny fitrandrahana ka hatrany amin'ny banky ka hatrany amin'ny fitsaboana
1.1 BHP Miliara
1.2 Banky Commonwealth ao Aostralia
1.3 Vondrona Rio Tinto
1.4 Vondrona Woolworths
1.7 Westfarmers, mpivarotra isan-karazany amin'ireo orinasa aostralianina lehibe indrindra
1.9 Vondrona Transurban
1.10 Amcor Limited, fonosana hamoronana iray amin'ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra
Inona ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra? Manomboka amin'ny fitrandrahana ka hatrany amin'ny banky ka hatrany amin'ny fitsaboana
Ny orinasa Australiana lehibe indrindra dia manana sehatra samihafa amin'ny toekarena, saingy samy manana tanjaka lehibe amin'ny sehatry ny asany avy izy ireo. Haneho anao ny sasany amin'ireo orinasa ireo izahay.
Momba izany iray amin'ireo orinasam-pitrandrahana lehibe indrindra eto an-tany. Teraka tamin'ny 2001 avy amin'ny fampiraisana ny anglisy Billion ary ny aostraliana Tompon'ny havoana tapaka. Ny foibeny dia ao Melbourne, saingy manana delegasiona any amin'ny firenena dimy amby roapolo, izay amoahana mineraly toy ny vy, diamondra, nikela ary na bauxite aza.
Tamin'ny taon-dasa dia nanambara ny fidiram-bolany manodidina izany 46 miliara dolara, miaraka amin'ny tombombarotra tombony kely latsaka ny antsasaky ny manodidina ny 20 lavitrisa dolara.
Sampana iray an'ny Commonwealth Bank of Australia
Banky Commonwealth ao Aostralia
Araka ny hitanao amin'ny anarany, banky miasa izy io, tsy amin'ny firenena ranomasina ihany, fa koa amin'ny hafa rehetra ao amin'ny faritra, ary koa amin'ny Asia ary na dia ao aza Etazonia y Grande-Bretagne.
Amin'ny fifaninanana henjana amin'ny banky lehibe hafa ao amin'ny firenena, ny National Australian, Commonwealth dia lehibe kokoa noho ny amin'ny kapitalisma. Tamin'ny taon-dasa dia nanambara ny vola miditra manodidina izany 30 miliara dolara aostralianina, izany hoe 45 miliara euro eo ho eo.
Vondrona Rio Tinto
Miverina amin'ny hetsika fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izahay mba hilazana aminao momba ity orinasa ity izay isan'ireo orinasa aostralianina lehibe indrindra koa. Ny foiben-toerany dia mbola any Londres, saingy teraka tamin'ny fampiraisana ny anglisy Orinasa Rio Tinto-Zinc, miaraka amin'ireo toeram-pitrandrahana any Espana, ary i Aostralianina Conzinc Rio Tinto.
Es orinasa mpitrandraka arintany lehibe indrindra eto an-tany ary taona vitsy lasa izay dia nanandrana novidiana tamin'ny BHP Billion, izay vao nolazainay taminareo. Na izany aza tsy vita ny fandidiana. Tamin'ny taona 2020, Río Tinto Group dia nitatitra ny vola azo saika 45 miliara dolara amerikana.
Izy io dia mitana ny iray amin'ireo toerana voalohany amin'ny fanasokajiana ireo orinasa an'ny fanafody na. Anisan'ireo faritra namokarany ny vaksinina, toy izany koa ny lohahevitra ankehitriny, fa koa ny vokatra azo avy amin'ny plasma sy ny famerenana sela hafa. Ny governemanta Aostralianina no namorona azy tamin'ny 1916, saingy natao tamin'ny privatisé tamin'ny 1994.
Izy io dia mampiasa olona 25 ary tamin'ny taon-dasa dia nisy fidiram-bola efa ho 10 miliara dolara izay saika roa arivo no tombony. Mikasika ny kapitalin'ny tsenany dia mitentina 145 miliara dolara izany.
Biraon'ny banky Westpac
Miverina indray ity banky iray ao amin'ity lisitra ity izay mamaly hoe iza no orinasa aostraliana lehibe indrindra. Niorina tamin'ny 1817, Pasifika tandrefana (midika hoe Westpac) dia natokana ho an'ny banky nentim-paharazana sy ara-barotra sy ara-barotra, fitantanana harena ary banky andrim-panjakana.
Misy sampana koa ao New Zealand. Mikasika ny sandany lehibe eo amin'ny tsena, dia manodidina ny 90 lavitrisa dolara aostralianina. Ny vola miditra azonao amin'ny taona 2020 dia efa ho 22 miliara ary ny tombony dia manodidina ny efatra lavitrisa dolara aostralianina. Raha ho an'ny mpiasany dia manodidina ny 40 arivo izy io.
Ny asan'ity orinasa ity dia misy ifandraisany amin'ny banky ihany, na dia eo aza ny tranga misy azy amin'ny fampiasam-bola. Manana ny toerany any amin'ny firenena 25 izy ary manana mpiasa mihoatra ny 14. Izany dia ny mpitantana ny fotodrafitrasa lehibe indrindra eto an-tany, satria mitantana 495 miliara dolara amin'ity karazana fananana ity.
Ny kapitalin'ny tsenany dia efa ho 53 miliara ary, tamin'ny 2020, nanambara izy tombony manodidina ny telo miliara dolara. Mahery vaika ity orinasa ity ka nantsoin'ny haino aman-jery Aostraliana hoe "ny Millionaire Factory."
Westfarmers, mpivarotra isan-karazany amin'ireo orinasa aostralianina lehibe indrindra
Raha natokana ho an'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny banky ary ny fahasalamana ireo orinasa teo aloha, dia manao izany ny iray antsinjarany. Manokana, mivarotra vokatra simika sy indostrialy, zezika izy ary, satria nahazo ny vondrona Coles, sakafo ihany koa.
Supermarket Coles Group, zanaky ny Westfarmers
Niorina tamin'ny taona 1914 ho kaoperativa tantsaha, dia mampiasa olona maherin'ny 2020 izy izao. Tamin'ny taona XNUMX dia nahazo fidiram-bola lehibe efa ho 31 miliara dolara, miaraka amin'ny tombony azo eo amin'ny roa eo ho eo.
Iray amin'ireo orinasa lehibe Aostralianina tsy afaka nanatrika ity lisitry ny orinasa natokana ity fifandraisan-davitra. Manokana, mivarotra telefaona raikitra sy finday, Internet ary tolotra fahitalavitra mandoa izany. Izy io no manan-danja indrindra amin'ireo izay miasa ao amin'ny firenena ranomasina, miaraka amin'ny kapitalisma mitentina 45 miliara dolara.
Tamin'ny taona 2019 dia nisy mpiasa 26 teo ho eo sy ny fidiram-bolany isan-taona manodidina ny 30 miliara dolara izy ireo hahazoana tombony efatra sahabo ho efatra.
Firenena goavambe i Aostralia, manana kilometatra kilometatra toradroa mahery. Noho izany, tsy hahagaga anao ny orinasa natokana ho azy ny fanamboarana sy ny fiasa amin'ny làlambe Io no anisan'ny lehibe indrindra amin'ny firenena.
Ankoatr'izay, Transurban koa dia miasa ao Canadá y Etazonia. Ny kapitalin'ny tsenany dia manodidina ny 43 miliara dolara ary noforonina tamin'ny taona 1996. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 1500 XNUMX ny mpiasa ao aminy ary manana karama lehibe izay manodidina ny 3 miliara dolara izy ireo miaraka amin'ny tombony azo manodidina ny arivo.
Amcor Limited, fonosana hamoronana iray amin'ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra
Ity orinasa ity dia natokana ihany koa amin'ny fitaterana, na eo aza ny sehatry ny fonosana. Izy io dia misy any amin'ny firenena efapolo, ao anatin'izany España, ary manana sandan'ny tsena mitentina $ 27 miliara. Manana mpiasa eo amin'ny 35 eo izy ary manana fidiram-bola lehibe efa ho 10 miliara dolara, raha toa ka manodidina ny 1500 tapitrisa ny tombony azo.
Ho famaranana, raha manontany tena ianao izay orinasa aostraliana lehibe indrindraEfa hitanao fa an'ny sehatra toa ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny banky ary ny fitaterana izy ireo. Na izany aza, orinasa lehibe hafa, toa ny CLS voafetra, dia manao ny asa fanadiovana vokatra na, toy ny Vondrona Goodman, ho an'ny tontolon'ny asa trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Inona ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra?
Famoronana siantifika sy teknolojia aostralianina